कोभिड–१९ : के के खाएमा कोरोना सर्दैन् ? यस्तो छ भ्रम र यथार्थ ! – Complete Nepali News Portal
कोभिड–१९ : के के खाएमा कोरोना सर्दैन् ? यस्तो छ भ्रम र यथार्थ !
इश्वरचन्द्र झा- पानी पिउँदै मुख ओसिलो बनाए कोभिड–१९ बाट बँच्न सकिने तथ्य अफवाह रहेको पुष्टि भएको छ । बीबीसीले गरेको एक अध्ययन र खोजबीनमा उक्त तथ्य अफवाह मात्रै रहेको पुष्टि गरेको छ ।
सम्भवतः पानी पिउँदा कोभिड–१९ को संक्रमणबाट मुक्त हुने अनुसन्धान भएको छैन् । त्यसैले यो तरिका वा तर्क विज्ञान वा तथ्यमा आधारित छैन् ।